मेरो घुँडा दुख्छ जब म यो झुकाउँछु
२०-१०-२3 मा प्रशासक द्वारा
मेरो घुँडा दुख्छ जब मँ यो मोड्छु र यसलाई सीधा बनाउँछ 25% भन्दा बढि वयस्कहरू घुँडा दुख्छन्। हाम्रो दैनिक क्रियाकलापका कारण हाम्रो घुँडा ठूलो दबाब हुन्छ। यदि तपाईं घुँडाको दुखबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईंले सायद याद गर्नु भएको छ कि घुँडा दुख्छ र घुमाउँदा र सीधा बनाउँदा। आउनुहोस् जाँच गर्नुहोस् ...
किन मेरो घुँडा दुख्छ?
किन मेरो घुँडा दुख्छ? सबै उमेरका मानिसहरूका बीच घुँडा दुख्ने कुरा साधारण अवस्था हो। यो कि त आघात वा चोटको परिणाम हुन सक्छ, वा चिकित्सा अवस्था जसले लामो समयसम्म घुँडा दुख्ने गर्दछ। धेरै मानिसहरू पीडाको अनुभव गर्दै छन् जब म हिंड्दा मेरो घुँडा दुख्छ किन? वा किन मेरो घुँडा दुख्छ जब यसको ...
कम्मर सुरक्षा को समारोह
२०-०8-२6 मा प्रशासक द्वारा
कम्मर सुरक्षा भनेको के हो - कम्मर सुरक्षा को भूमिका के हो? कमर संरक्षण, जस्तो कि नामले देखाउँदछ, कपडा वरिपरि कम्मर रक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ। कम्मर सुरक्षा लाई कमर र कम्मर पनि भनिन्छ। वर्तमानमा, यो आसीन र लामो स्थायी कामदारहरूको विस्तृत श्रृंखलाको लागि उत्तम विकल्प हो ...
बेली फ्याट तपाईको दिमागको लागि खराब पनि हुन सक्छ
बेली फ्याट लामो समय देखि तपाइँको मुटु को लागी खास गरी नराम्रो मानिएको छ, तर अब, एक नयाँ अध्ययनले यो विचारलाई थप प्रमाण दिन्छ कि यो तपाइँको दिमागको लागि खराब पनि हुन सक्छ। युनाइटेड किंगडमले गरेको अध्ययनले पत्ता लगायो कि मोटोपन भएका व्यक्तिहरू र उच्च कम्मरदेखि हिप अनुपात (पेट फ्याटको एक उपाय) भएका व्यक्तिहरू ...
COVID-१ rect मा ठीक तरीकाले मास्क कसरी लगाउने
निश्चित गर्नुहोस् कि मास्कले नाक र मुख छोप्दै छ COVID भाइरस थोपाबाट फैलिएको छ; जब हामी खोक्दछौं वा छींकन्छ वा कुरा गर्छौं यो फैलिएको छ। डाक्टर एलिसन ह्याडॉकले मेडिसिनको बेल्लोर कलेजसँग एक व्यक्तिबाट एक थोपा अर्को मान्छेमा सार्छ। डा। ह्याड्क भन्छिन् उनी मास्क गल्तीहरू हेर्छिन्। K ...
बिहान खाली पेटमा पानी पिउने of फाइदाहरू
१. तपाईको मेटाबोलिज्म अध्ययनलाई सुधार गर्दछ यसले देखाएको छ कि खाली पेट पानी पिउँदा मेटाबोलिक दर 30०% बढाउन मद्दत गर्दछ। यसको मतलव क्यालोरीहरू जलाउने दरमा लगभग एक तिहाइ बढ्छ। तिमीलाई थाहा छ त्यो सहि के हो? - द्रुत वजन घटाउने! यदि तपाईंको मेटाबोलिक दर ...